Kazhinji, ruzivo ratinoda runovharwa mune imwe nzvimbo, uye isu haikwanisi kuidzika kana kuikamba zvakanaka. Kunyange zvazvo dzimwe nzvimbo dzichiita kuedza kupa dhiyabhorosi muzvigadzirwa zvakachena uye zvakarongeka, vamwe havakwanise kupa chero webhuhu yekunyorera kana data scraping facility. Ndicho chikonzero nei tichatanga kuwana zvakanakisisa webvambisi vebasa, vanofambisa minda, uye scrapers. Pano takakurukura matanho mashanu pamusoro apa.
Kana iwe uneGoogle Chrome sewekutanga web browser, unofanira kusarudza Web Scraper. Icho chirongwa chakakosha chekucheka uye chemigodhi chinokubvumira kuti ugadzire sitemaps kune mbiri yako yeblogi uye mabhizimusi ewebsite. Iwe unotofanira kutora, kuisa uye kuwedzera ichi chinyararire kune browser yako Chrome uye ona kuti ichabvisa sei kubva kune mawebsite ako. Iwe unogonawo kutumira mapepa ekushandisa kana kushandisa mapepa ayo kuti uwedzere kutarisa nekushanda kwewebsite yako. Ichachengetedza deta yako yakabudiswa mumafaira e CSV kana muIyoyo Archive folder Source .